IGeofeedia: Ukuqapha Kwemidiya Yezenhlalo, Ubuhlakani kanye nokuhlaziywa ngendawo Martech Zone
I-Geofeedia iyipulatifomu enelungelo lobunikazi abathengisi abangayisebenzisa ukuqapha nokuhlaziya imithombo yezokuxhumana esendaweni Lokhu kungaba isu lokukhangisa eliwusizo kakhulu ekuphatheni idumela, noma kumasu wokuthola okusebenzayo. Mhlawumbe ungumhlinzeki wesevisi noma unabamele abaningi bezinsizakalo ezindaweni ezithile - ungabheka yonke imigwaqo yezokuxhumana lapho ushiwo noma ngamakhasimende angaba khona afuna usizo.
Izici nezinzuzo zeGeofeedia
Gada - Hlanganisa nokugcina okuqukethwe kwemidiya yomphakathi kusuka ezifundeni ezichaziwe.
Hlunga - Hlela imiphumela yokusesha ngegama elingukhiye, umsebenzisi, usuku, ihora, umthombo wezokuxhumana nokuningi.
Buka ngeso lengqondo - Ukubukwa kwemephu kukhombisa indawo eqondile yokuqukethwe kwakho, ukubuka kwekholaji kukukhombisa isikhathi nokulandelana kokuthunyelwe nokusakazwa bukhoma kukhombisa okuqukethwe okusha ngesikhathi sangempela kusuka ezindaweni eziningi kusikrini esisodwa.
Hlaziya - Imayini egciniwe yedatha yokukhomba ukuthambekela kwamagama asemqoka, umsebenzi osuselwa esikhathini, amaphosta anethonya, izitayela zomsebenzi, imithombo yezokuxhumana nabantu nokuningi.
Archive - Gcina idatha yakho esikhungweni sedatha esuselwa emafini ukuze uphinde uyithole futhi uyihlaziye.
Thumela - IGeofeedia inikeza okufakiwe okugcwele kwe-API, ukuthekelisa i-CSV, amawijethi angashumeka nokuthunyelwa kwedatha kwe-RSS kuma-ATOM, ama-GeoRSS noma amafomethi we-JSON.
Izaziso - Thola izexwayiso ze-imeyili ezizenzakalelayo ngesikhathi sangempela ngokuya ngegama elingukhiye elithile noma izimbangela zegama lomsebenzisi.
Humusha - Humusha imiphumela yosesho cishe kunoma yiluphi ulimi ngokuchofoza okukodwa.
Dala imingcele yangokwezifiso yombuzo wakho wezokuxhumana
Buka i-Location-Based Social Media Query nge-Collage
Hlaziya Indawo Yezenhlalo Yomphakathi
I-RTS - Ukubukwa Kwemephu
I-RTS - Izibalo
Ukuqopha i-Analytics & Sentiment
Abathonya - Ukubuka kwe-Collage
Ukuze ufunde kabanzi ngokukhonjwa kwe-geosocial, landa iphepha labo elimhlophe, i- “The Geosocial Marketer's Roadmap”, namuhla.
Landa umgwaqo womgwaqo we-Geosocial Marketer
Tags: ingobo yomlando yokuxhumana nomphakathigeogeofeediangokwendawoizexwayiso zemidiya yezenhlalogisukuhlaziywa kwemithombo yezokuxhumana endaweniukuhlakanipha kwezokuxhumana komphakathi okususelwa endaweniizexwayiso zokuxhumana nabantuizifunzo zokuxhumanaukuhlakanipha kwezokuxhumana nabantuukuqapha ezokuxhum